SAWIRRO:-Nin Afduubatay Bas caruur saaran kadibna dab qabadsiiyay | Wardoon
Home Somali News SAWIRRO:-Nin Afduubatay Bas caruur saaran kadibna dab qabadsiiyay
SAWIRRO:-Nin Afduubatay Bas caruur saaran kadibna dab qabadsiiyay
Bas ay saaran yihiin 51 carruur iskuul ah ayuu afduubtay nin darawal ah ka dibna dab ayuu ku qabadsiiyay meel u dhaw magaalada Milan ee dalka Talyaaniga.
Carruurta oo qaar ka mid ah ay gacmaha ka xidhxidhan yihiin ayaa laga soo badbaadiyay daaqadaha oo la jajabiyay, mana jiro mid ka mid ah oo si wayn ugu dhaawacmay. Afar iyo toban ruux ayaase ku neef qabatoobay qiiqa.
Darawalka oo ah 47 jir Talyaani ah balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Senegal ayaa la xidhay.
“Waa mucjiso, masiibo ayayna noqon kartay,” ayaa laga soo xigtay in uu yidhi Francesco Greco oo dacwad ooge sare ka ah magaalada Milano.
Dacwad oogeyaasha ayaa sheegay in ninkan lagu soo oogi doono dacwado ay ka mid yihiin afduub, isku day in uu dad badan laayo, in uu dab shiday iyo in uu ka dhago adaygay in la xidho.
Previous articleDAAWO Xabsi Qarsoodi Ah Oo Emaratka Carabtu Kasamaystay Eritrea Oo La Khashifay
Next articleWararkii ugu dambeeyay ciidankii gadoodsanaa
Dadkii ku dhaawacmay qaraxii Gaalkacyo oo Muqdisho la keenay+SAWIRRO
Al-Shabaab oo saaka weerar kuqaday saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Camp...